१५ दिनका लागि भोजपुर प्रवेशका नाकाहरु सिल- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका थप तीन जनामा कोरोना संक्रमण
भाद्र १०, २०७७ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा — बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका थप तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।योसँगै अस्पतालभित्रैका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी संक्रमितको संख्या १४ पुगेको छ ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमका अनुसार बुधबार बिहान अस्पतालको प्रशासन शाखामा कार्यरत ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । कोरोना पुष्टि भएका तीनै जना सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको गौतमले बताए । यसअघि संक्रमण भएका अन्यम ध्ये केही निको भइसकेका छन् भने केही सेल्फ आइसोलेसनमै छन् ।
अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि काम गर्ने समय तालिकामा परिवर्तन आएको डा. गौतमले जनाए । यसअघि ६ घण्टामा सिफ्ट परिवर्तन हुने गरेकामा अहिले एउटै कर्मचारीले १२ घण्टा काम गरिरहेका छन् । अस्पतालका संक्रमितमध्ये ९ जना स्वास्थ्यकर्मी हुन् भने ५ जना प्रशासनका कर्मचारी हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण देखिदै गएपछि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाल सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७७ १५:११